के प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम तपाइँको लागी मतलब छ: जुलाई १ र बाहिर ... - फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टर
प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षा ऐनले तपाइँको लागि केलाई बुझाउँदछ: जुलाई १ र पछाडि…
२०२० अप्रिलमा राज्यपाल नर्थमले प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षण ऐन (आरएचपीए) लाई कानूनमा हस्ताक्षर गरे - एउटा कानून जुन पछाडि रोल केही दशक पहिले भर्जिनियाको राष्ट्रमंडलमा गर्भपतन हेरचाहमा राखिएको केही प्रतिबन्धहरू। भर्जिनिया हाउस र सेनेट मार्फत RHPA पारित र गभर्नरको टेबुल पार एक जीत हो जसले भर्जिनियामा गर्भवतीको अधिकारलाई पुष्टि गर्दछ कि उनीहरूको शरीरको बारेमा निर्णय आफनो राज्य र उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकहरु बीच आउँदैन। हामी एफएचसीसीका सदस्यहरु र भर्जिनियाका व्यवस्थापकहरु र मतदाताहरुमा आरएचपीएको महत्त्वलाई जोड दिन प्रक्रियाको एक हिस्सा भएकोमा गर्व गर्दछौं।
यहाँ के केहि छ हामी हौं जुलाई १ मा FCHC मा हेर्दै जब RHPA प्रभाव लिन्छ:
हामी गर्भपतन हेरचाहको लागि बिरामीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले स्वागत गरेका मार्गमा फर्केका छौं २००२ मा खोलेझैं एउटा भ्रमणमा। जुलाई १ देखि बिरामीहरू अबदेखि हाम्रो केन्द्रको भ्रमणको बीच २ 1 घण्टा पर्खाइको अधीनमा हुनेछैन। FCHC त्यसो गर्न सक्षम थियो सुरक्षित र उत्तरदायी रूपमा २०११ को प्रतिबन्ध सम्म एकल भ्रमणमा। यसले समय र स्रोतहरू बचत गरेर हाम्रा बिरामीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। यसको मतलब अब कामको थप दिन बन्द गर्नुपर्दैन। वा थप दिनको लागि हाम्रो केन्द्रमा यातायात पत्ता लगाउन। वा त्यो अतिरिक्त दिनको लागि बाल देखभाल सुरक्षित गर्न। सबै बनाउने गर्भपतन हाम्रो बिरामीहरू र यसलाई छनौटकर्ताहरूको लागि बढी पहुँचयोग्य बनाउँदछ।
हामीसँग बिरामी हेरचाहको लागि अधिक समय र संसाधनहरूलाई प्राथमिकता दिने अवसर हुनेछ। अब हामीसँग बिरामीहरूलाई उनीहरूले पाउनु पर्ने हेरचाह र ध्यान प्रदान गर्ने अवसरहरू छन्। विगत धेरै वर्षहरुमा, FCHC वर्जिनिया व्यवस्थापिका द्वारा २०११ मा जनादेश प्राप्त केहि hops मार्फत जानुपरेको थियो। RHPA यी प्रतिबन्धहरू हटाउँछ!
अब एक अल्ट्रासाउन्ड बिरामी र प्रदायकहरु बीच एक निर्णय मात्र हुन सक्दछ किनकि यो सँधै बिरामी हेरचाहको एक हिस्साको रूपमा रहेको थियो। बिरामीको लागि सब भन्दा राम्रोको निर्णय अब व्यवस्थापिकाद्वारा जनादेश लिने छैन; यसको सट्टामा, यो बिरामीहरू र उनीहरूको डाक्टर बीचको कुराकानीमा आधारित हुनेछ र हाम्रा बिरामीहरूको व्यक्तिगत निर्णयहरूको लागि अनुमति दिनेछ। हामी हाम्रो बिरामीहरूलाई बढी स्वायत्तता र उनीहरूको शरीर र उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको बारेमा सहमति भएको उत्सव मनाउँछौं।
COVID को समायोजन र हाम्रो बिरामीहरूको समयको सम्मानका लागि हामी बिरामीहरू हाम्रो सुविधामा हुनुपर्ने समयको मात्रा कम गर्न सक्षम हुनेछौं। इन्टेक पेपरवर्क पूरा गर्ने र उनीहरूको गर्भपतन हेरचाहको बारेमा अनलाइन सूचित छनौट गर्ने थप अवसरहरूको साथ, बिरामीहरूले उनीहरूको अपोइन्टमेन्टहरूको समय तालिका तयार गर्न सक्दछन् र घरमै बाहिर कामको बेला तयार हुन्छन् बरु हाम्रो लबीमा पर्खनुपर्दा प्रशोधनको लागि पर्खनु पर्दैन। विशेष गरी COVID को यस समयमा हामी बिरामीको अनुभवलाई स्वस्थ, सुरक्षित र आरामदायी बनाउन खोजिरहेका छौं जतिखेर हामी हाम्रो सुविधाको भौतिक दूरी निर्देशनहरू पालना गर्दछौं।
स्वतन्त्र हेरचाह सुविधाको रूपमा, हामी हाम्रो सबै स्टाफसँग काम गर्दै छौं हाम्रो बिरामीहरूको राम्रो सेवा कसरी गर्ने सम्भावनाहरू जुन हाम्रो लागि खुला हुनेछ। हामी यो निर्धारण गर्दैछौं कि यसले हाम्रो तालिका अवसरहरू र दूर परामर्शका लागि सम्भावनाहरू कसरी विस्तार गर्न सक्छ! हामी तपाईलाई पोष्ट गर्न निश्चित छौं हामी तपाईका बिरामीहरूका लागि उत्तम सम्भावित अवसरहरू प्रदान गर्न यी परिवर्तनहरू परिचय गराउँदछौं र रोल आउट गर्दछौं।
हामी यी परिवर्तनहरूका बारे उत्साहित छौं - र हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं पनि हुनुहुन्छ!
अघिल्लो पोष्ट हाम्रो भिडियोहरू हेर्नुहोस् - र हाम्रो केन्द्र भ्रमण गर्नुहोस्!
अर्को पोस्ट हाम्रो नयाँ भिडियोहरू जाँच गर्नुहोस्!